Yakatangisa yechipiri beta ye macOS Catalina 10.5.6 yevagadziri | Ndinobva mac
The WWDC gore rino uye Apple inoda kugadzirira zvese. Iwe uchangobva kuburitsa vhezheni itsva ye macOS Catalina. Zviripachena, pasina nhau yekuti ichaburitsa mazuva ano mune yayo yepasi chiitiko yakapihwa kune programmers, inongogadzirisa zvimwe zviputi mune yayo yapfuura vhezheni.
Pane zvishoma zvasara pachiitiko chakakosha ichi, musangano wepasirese wevatambi veApple uchaitirwa 22 yeJune. Tichaona anotsiva macOS Catalina. Parizvino, ivo vanogona kuenda kunoyedza iyi yazvino vhezheni, kuti vaone kana vachigona kuwana chero inonakidza nhau.
Apple ichangoburitsa beta yechipiri yeinouya yekuvandudza ku macOS Catalina 10.15.6 kune vagadziri vezvinangwa zvekuyedza. Vhiki rimwe mushure mekutanga beta yaburitswa uye vhiki mbiri mushure meMacOS Catalina 10.15.5 iyo yaisanganisira iyo nyowani bhatiri hutano manejimendi maficha eMacs.
Iyo beta vhezheni ye macOS Catalina 10.15.6 inogona kutorwa pasi kubva kuSystem Preferences mushure mekuisa yako yekuvandudza account kubva ku Developer Center of Apple.
Hazvisati zvazivikanwa kuti ndedzipi shanduko dzinounzwa new MacOS Catalina inogadziridza. Zvichango sanganisira kuvandudzwa kwekuita, zvigadziriso zvekuchengetedza, uye gadziriso dzebug dzisingakwanise kugadziriswa mune yapfuura kugadzirisa Hapana maficha matsva akawanikwa mubeta rekutanga, saka anozove ari madiki gadziriso.
Zviripachena, hapana chinhu chitsva chezvinhu izvo Apple zvaachazotipa zvichaonekwa senguva dzose mune nyowani shanduko yeMacOS ichauya kuWWDC gore rino, mumavhiki mashoma.
Tichave tichiziva kwazvo nezvechiitiko ichi kuti tione panoshanduka macOS, uye kana ichitipa chero ruzivo rweimwe ramangwana remacOS, kana pakupedzisira maMac ane ARM zvivakwa, sezvanga zvichitaurwa munguva pfupi yapfuura. Musi waJune 22 tichasiya kusahadzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Catalina » Iyo yechipiri beta ye macOS Catalina 10.5.6 yevagadziri yakaburitswa
Netherlands neSweden vanovhurazve Apple Store yavo nhasi 10